कारभित्र एक जोडी युवायुवती यौनक्रिडामा मस्त रहेको दृश्य सडकमा | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
कारभित्र एक जोडी युवायुवती यौनक्रिडामा मस्त रहेको दृश्य सडकमा
निर्वस्त्र हुने डान्स क्लबको मज्जा लुटेपछि २४ वर्षकी युवती र उनका ३३ वर्षे प्रेमी कार पार्किङतर्फ लागे । सुरुमा त उनीहरु आफ्नो कार चलाएर घरतिर फर्किने सुरमा थिए । तर मनले मानेनछ । दुवैजना कारभित्र छिरेपछि ढोका लगाएर यौनक्रिडा गर्न थाले ।
मुख्य सडकको नजिक पार्किङस्थलमा रहेको कारभित्र एक जोडी युवायुवती यौनक्रिडामा मस्त रहेको दृश्य सडकमा गाडि चलाउने तथा हिड्नेहरुले देखिहाले ।
आफ्नै आखाअगाडि त्यस्तो दृश्य देखेपछि कसको मनले मान्थ्यो र ? गाडी चलाउनेहरुले पनि गाडीको स्पीड कम गरेर एक झलक भएपनि हेर्नथाले र बटुवाहरु त अझ उभिएरै हेर्न थाले । कारभित्रको यौनलीला हेर्ने गाडीचालकहरुले गाडीको गति कम बनाउँदा त्यहाँ ट्राफिक जाम भयो ।
कारभित्रको यौनलीलाले टाफिक जाम भएपछि प्रहरीकहाँ खबर पुग्यो र घटनास्थलमै प्रहरी आएर यौनलीलामा मस्त युवायुवतीमाथि हस्तक्षेप गर्नुपर्यो ।
घटना अमेरिकाको ओरेगनस्थित स्पि्रफिल्डको हो । २४ वर्षकी केली एम नुट्सन र ३३ वर्षका लोगान ज्याक्सनले वैँशमा मात्तिएर सार्वजनिक स्थानमै यस्तो लज्जाजनक हर्कतमा उत्रिएका थिए ।
कारभित्र यौनक्रिडा गरिरहेको बेलामा प्रहरीले रंगेहात समाएका उनीहरुले प्रहरी आएर कारको ढोका ढक्ढकाएपछि मात्र आफ्नो नित्यकर्म छाडेका थिए । प्रहरीले उनीहरुलाई सार्वजनिक स्थानमा अश्लीलता फैलाएको आरोपमा पक्राउ गरेको छ ।